Waa Maxay Qiimaha Lagu Hesho Macaamiisha Macaamilku? | Martech Zone
Arbacada, Maarso 9, 2016 Douglas Karr
Waxaa jira xoogaa xigmad ah oo jirta Qiimaha helitaanka macmiil cusub noqon karaa 4 ilaa 8 jeer kharashka haynta mid. Waxaan leeyahay xigmad ka jirta maxaa yeelay waxaan arkaa in tirakoobkan inta badan la wadaago laakiin dhab ahaantii ma helayo ilo uu ku raaco. Shaki iigama jiro in haysashada macmiilku ay uga qaalisan tahay urur, laakiin waxaa jira waxyaabo ka reeban. Ganacsiga wakaaladda, tusaale ahaan, badanaa waad awoodaa ganacsato - macmiil ka taga waxaa lagu beddelay mid ka macaash badan. Xaaladdan oo kale, haysashada macaamiil waayeen kharash garee lacagtaada ganacsiga waqti kadib.
Si kastaba ha noqotee, xisaabinta badankood waa kuwo waqtigoodii dhacay sababtoo ah saameynta macaamiisha ay ku leeyihiin dadaalka suuqgeynta. Warbaahinta bulshada, markhaatiyada khadka tooska ah, goobaha dib u eegista, iyo makiinadaha wax lagu baaro ayaa siiya gawaarida gudbinta ee cajiibka ah macaamiisha cusub. Marka shirkadaha aad la shaqeysid ay ku qancaan, badiyaa waxay la wadaagaan taas shabakadooda ama bogagga kale. Tani waxay ka dhigan tahay in haynta liidata ee maalmahan ay saameyn taban ku yeelan doonto istiraatiijiyaddaada helitaanka!
Qaadashada iyo Qaaciddooyinka Haynta (Sannadle)
Qiimeynta Macaamiisha = (Tirada Macaamiisha Sannad kasta Baxaysa) / (Wadarta Tirada Macaamiisha)
Qiimeynta Macaamiisha = (Tirada Guud ee Macaamiisha - Tirada Macaamiisha Sannad kasta Baxaysa) / (Wadarta Tirada Macaamiisha)
Qiimaha Nolosha Macaamiisha (CLV) = (Wadarta Faa'iidooyinka) / (Heerka Qiyaasta Macaamiisha)
Qiimaha Qaadashada Macaamiisha (CAC) = (Wadarta Miisaaniyadda Suuqgeynta iyo Iibka Oo Ay Ku Jiraan Mushaharka) / (Tirada Macaamiisha La Helay)
Qiimaha Attention = (Qiimaha Nolosha Macaamiisha) * (Tirada Macaamiisha Sanadlaha ah ee Lumay)
Dadka waawayn ee aan waligood xisaabintaan ka hor, aan eegno saameynta. Shirkaddaadu waxay leedahay 5,000 oo macmiil ah, waxay lumisaa 500 oo ka mid ah sannad kasta, mid walbana wuxuu ku siiyaa $ 99 bishiiba adeeggaaga oo leh faaiido faa'iido ah oo ah 15%.
Heerka Quudinta Macaamiisha = 500/5000 = 10%
Heerka Heynta Macaamiilka = (5000 - 500) / 5000 = 90%
Qiimaha Nolosha Macaamiil = ($ 99 * 12 * 15%) / 10% = $ 1,782.00
Haddii CAC-gaagu yahay $ 20 macmiilkiiba, taasi waa adag soo noqoshada maalgashiga suuq geynta, waxay ku bixisay $ 10k bedelida 500 ee macaamiil ee tagay. Laakiin ka waran haddii aad kordhin karto haynta 1% adoo isticmaalaya $ 5 doolar macmiilkiiba? Taasi waxay noqonaysaa $ 25,000 oo lagu kharash gareeyay barnaamijka haynta. Taasi waxay ka kordhin lahayd CLV-gaaga $ 1,782 illaa $ 1,980. Inta aad nooshahay macaamiishaada 5,000, waxaad kaliya ku kordhisay khadkaaga hoose ku dhowaad hal milyan oo doolar.
Xaqiiqdii, 5% kororka heerka macaamilka #ku haynta waxay kordhisaa faa'iidada 25% ilaa 95%
Nasiib darrose, sida ku xusan xogta lagu qabtay tan infographic ka socda Invesp, 44% shirkaduhu waxay diirada saaraan # helitaanka halka kaliya 18% ay diirada saaraan # haynta. Ganacsiyadu waxay u baahan yihiin inay aqoonsadaan in waxyaabaha iyo istiraatiijiyadda bulsheed ay inta badan bixiyaan qiimo ka badan habka haynta marka loo eego helitaanka.
Tags: soo iibsiga iyo dib u celintaQiimaha Attentionqiimaha helitaanka macaamiishahelitaanka macaamiisha iyo ka-hayntaQiimeynta Macaamiishaqiimaha nolosha macaamiishahaynta macaamiishaheerka haynta macaamiishainfographicmaalgelin
Tani waa macluumaadka saxda ah ee aan raadinayay. Waad ku mahadsantahay wadaagida khibradaada!
Waan ku faraxsanahay inaan aqriyay maqaalkaaga. Tani waxay saameyn ku yeelan doontaa go'aannadayda mustaqbalka ee ganacsigeyga. Waxaan runtii u baahanahay inaan daryeelo kuwa daacada noo ah.